La Coppia Piu 'Bella Del Mondo - Celentano & Claudia Mori - Miditeca
ပင်မစာမျက်နှာ kar la Coppia Piu '' Bella Del မန်းဒ - Celentano & လော်ဒီယာ Mori
La Coppia Piu’ Bella Del Mondo – Celentano & Claudia Mori
La coppia piu 'Bella del mondo - ကလောဒီယာမောရီ၏ Celentano & Claudia Mori အခမဲ့ MIDI ကာရာအိုကေ download, ( မှတ်ပုံတင်ခြင်းမသင်္ကေတပြ Up ကိုမကန့်သတ်ဒေါင်းလုပ် miditeca.me အဘယ်သူမျှမ). Miditeca.me 70.000 MIDI ကာရာအိုကေကျော် MIDI ကာရာအိုကေများအတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးအခမဲ့ site ကို
တခြားစာအုပ်တွေရှာဖွေနေခြင်းဖြင့် ဂလော်ဒီယာ Moriအဆိုပါအနုပညာရှင်ရဲ့စာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ် ဂလော်ဒီယာ Mori ၏အခြား MIDI ကာရာအိုကေများအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ (အဆိုပါပြတင်းပေါက်အခြားစာမျက်နှာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်)
ဤတွင်ဖြစ်ပါသည် သီချင်းစာသား (ကာရာအိုကေ) သင်ကူးယူလိုသောသီချင်း၏သီချင်း၊ La coppia piu 'bella del mondo ကို download လုပ်ရန် link ကို - ကလောဒီယာမောရီ၏ Celentano & Claudia Mori ကိုစာမျက်နှာ၏အဆုံးတွင်တွေ့နိုင်သည်။
စာသား La coppia piu 'bella del mondo - ကလောဒီယာမောရီ၏ Celentano & Claudia Mori
mi piace ogni cosa di quello che FAI
se စင်ကြယ်သောမိုင် tratti un po '' da bambina
ti credi Gia '' Donna, ma tu မဟုတ်တဲ့ lo
questo cosi '' tu နှုန်း SEI SEI Fort
Siamo la coppia piu '' Bella del မန်းဒ
အီး ci dispiace နှုန်း gli altri che sono
tristi အီး sono tristi ပုံမှန်အတိုင်း '' မဟုတ်သော sanno
piu '' cos'e '' l'Amore! il Vero Amore
semper unito Dal cielo nessuno နှုန်း
terra anche se vuole puo '၌ separarlo
mai .. l'ဟက်တာ detto lui siamo la coppia
piu '' Bella del မန်းဒင ci dispiace
နှုန်း gli altri che sono tristi ပုံမှန်အတိုင်း ''
မဟုတ်တဲ့ sanno il Vero Amore cos'e ''
se tu ti stancassi un နေ့စဉ်ကျမ်းချက် di ငါ့ကို
ricordati semper di quella bambina ..
nemmeno un minuto lasciarti potrei
questo cosi '' tu မိုင် Vai နှုန်း SEI Fort
mai "il Vero Amore"
La coppia piu 'bella del mondo - Celentano & Claudia Mori ဒီဖိုင် extension က kar ။
ဂလော်ဒီယာ Mori အပေါငျးတို့သအနုပညာရှင်ရဲ့ဖိုင်များကိုကြည့်ရှုပါ
ယခင်ဆောင်းပါးnon SuccederàPiù - ဂလော်ဒီယာ Mori & Celentano
next ကိုဆောင်းပါးchi မဟုတ်သော Lavora - Celentano & လော်ဒီယာ Mori
Non mi lasciare qui – Cammariere free midi karaoke
Mariti in citta – modugno free midi karaoke
The Shape Youre In – Eric Clapton free midi karaoke
It Never Rains In Southern California – (v3) Albert Hammond ...
Ramazzotti – Solo Ayer free midi karaoke
Vivo Per Lei – (FR) Helene Segara & Andrea Bocelli
15 ခုနှစ်ဧပြီလ 2018
Lontano lontano – (v2) mina free midi karaoke
Stupendo finoaqui – Alessandra Amoroso free midi karaoke
12 ခုနှစ်ဧပြီလ 2018
It don t meanathing – cab calloway free midi...
Danza danza – Eduardo De Crescenzo free midi karaoke
Talkin About The Revolution – (v3) Tracy Chapman free midi karaoke
Bellezze in bicicletta – giovannidanzi free midi karaoke
16 ခုနှစ်ဧပြီလ 2018
Dont Look Back In Anger1 – Oasis
Strange kind of woman – Deep Purple free midi karaoke
Diamante – Casadei free midi karaoke
Santa Fe – Juan Gabriel
3 ဇွန်လ 2019
Opium – Daniel Belanger